Amai Makarau vanoti kutanga neMuvhuro vanenge vatanga hurongwa hwekudzidzisa vanhu vachazonodzidzisawo vamwe vanhu mumatunhu ose enyika.
Panopera hurongwa uhu, panobva patanga humwe hurongwa hwekunyoresa vanhu kuti vanyorese kuvhota.
Amai Makarau vati michina yapinda munyika parizvino inosvika mazana mana uye vari kutarisira michina zviuru zviviri nemazana matanhatu kuti vakwanise kutanga hurongwa hwekunyoresa vanhu vangangosvika mamiriyoni manomwe. Vatiwo vanokwanisa kupedza hurongwa uhu gore risati rapera.
Vachitaura nezvekuraswa nematare kwesarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya, Amai Makarau vati zvakakosha kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena kuti pasave nekunetsana. Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo gore rinouya.